विश्वकप छनोटमा आज नेपालले बलियो अष्ट्रेलियासँग खेल्दै, कस्ले जित्ला त खेल ? - MeroKhelkud
२०७८ जेष्ठ २८ गते २०७८ जेष्ठ २८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर919LeaveaComment on विश्वकप छनोटमा आज नेपालले बलियो अष्ट्रेलियासँग खेल्दै, कस्ले जित्ला त खेल ?
काठमाडौं, २८ जेठ । सन् २०२३ मा चीनमा हुने एसिया कप र २०२२ मा कतारमा हुने विश्‍वकपको संयुक्त छनोट अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग खेल्दैछ । यो खेल कुवेत सिटीस्थित जाबेर अल अहमद अन्तराष्ट्रिय स्टेडियममा खेल राति ९ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
विश्वकप फुटबलको अनुभव बटुलिसकेको अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेल नेपालका लागि निकै कठिन हुनेछ । समूह ‘बी’ मा रहेकाे अस्ट्रेलिया १८ अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अस्ट्रेलिया अपराजित रहने समूहको एक्लो टिम हो ।
नेपाल भने चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपालले मात्र ६ अङ्क जोडेको छ । जारी छनोटमा नेपालले यसअघि चाईनिज ताईपेलाई २–० ले हराएको थियो । तर, नेपाल जोर्डनसँग ३–० ले पराजित भएको थियो ।
नेपाल अबदुल्लाह अलमुताइरीको प्रशिक्षण र किरण चेम्जोङको कप्तानीमा युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको टोलीका साथ मैदानमा उत्रिनेछ । प्रशिक्षक अलमुताइरीले आजको खेलमा अन्य युवा खेलाडीले पनि मौका पाउन सक्ने कुरा बताएका छन् ।
नेपाल यसअघि अस्ट्रेलियासँग भएको पहिलो खेलमा ५-० गोलले पराजित भएको थियो। नेपाली टोलीलाई विश्वकप खेलिरहेको टोलीसँग फेरि एकपटक अनुभव बटुल्ने मौका हुने छ।
श्रीलंका भ्रमणको लागि भारतिय टिमको घोषणा, धवन बने कप्तान
लेस्टर सिटीमाथि फराकिलो जित निकाल्दै वेष्टहम शीर्ष स्थानमा
२०७८ भाद्र ८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
‘ए’ डिभिजन लिगका लागि एनआरटीले भित्र्यायो दुई अफ्रिकी खेलाडी